ကျွန်ုပ်တို့လူသားများခံစားနေရသောစိတ်ဖိစီးမှု | Dogs World
စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွင်ပညာပေးခြင်း - လူသားများဖြစ်ပေါ်စေသောစိတ်ဖိစီးမှု
အန်တိုနီယို Carretero | | အထွေထွေခွေးများ
ဒီနေ့ခွေးတွေရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဆောင်းပါးတွဲတွေကိုဖြည့်စွက်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတတ်နိုင်သမျှအကျဉ်းချထားရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ ဤဆောင်းပါးတွဲများကိုကျွန်ုပ်နှင့်တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်။ သော်လည်းကောင်း၊ Canibus Cognitive Training မှ Javi Gonzalez၊ ခွေးလေ့ကျင့်ရေးမှRamón Arredondo၊ Refugio El Buen Friend မှ Ana Hernandez၊ Silvia Beseran ကဲ့သို့သောသူများအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့သင်ပေးပြီးသင်ပေးခဲ့တဲ့ GEDVA, Sandra Ferrer (သို့) Marcos Mendoza မှ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မည်သို့တန်ဖိုးထားသင့်သနည်း။
ဤခေါင်းစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ရန် ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ခြေလေးချောင်းရှိသောသူငယ်ချင်းများဖြစ်သော US တွင် Stress ၏အသုံးအများဆုံးအာရုံစိုက်မှုအကြောင်းကိုပြောပါမည်။ ပညာပေးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များအားခွေးအခြေအနေအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိကြောင်းနေ့စဉ်နီးပါးရှင်းပြရမည်ဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့သည်နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒီအကြောင်းကြောင့် Canine Educator အပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်သင်တန်းဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ပိုင်ရှင်ကပညာမတတ်ရင်ခွေးကိုပညာပေးဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ငါဝင်ပေါက်ဖြင့်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ,စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွင်ပညာပေးခြင်း - လူသားများဖြစ်ပေါ်စေသောစိတ်ဖိစီးမှု။ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးထဲတွင်စိတ်ဖိစီးမှုရင်းမြစ်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းသည်အခြားအရာများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်၎င်းတွင်ရှိသည့်အပြုအမူတစ်ခုခုကိုပြုပြင်လိုပါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုအတွက်ရှာဖွေရန်အလွန်လိုအပ်သည်။ ယခင်ပို့စ်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွင်ပညာပေးခြင်း: Stress Vငါခွေးရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက် (၁၁) ခုအကြောင်းပြောနေတာပါ၊ သူတို့မရှိရင်ငါတို့တိရိစ္ဆာန်ကိုဘယ်လိုဖိအားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပါ။
သို့သျောလညျး, ယနေ့ငါငါအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်ငါ့အကြိုက်ဆုံးခေါင်းစဉ်များထဲမှအကြောင်းပြောသွားတော့မည်, ငါကထပ်ခါတလဲလဲ၏ငြီးငွေ့စရာအကြောင်းမရှိ, ငါကသင်၏ ဦး ခေါင်း၌နေချင်သောကြောင့်, သင်တို့ကိုငါအဘို့အသိရန်ချင်တယ် သေချာတာပေါ့၊ အဲဒါကိုအမြဲတမ်းရေတွက်ထားပါ။ သင့်ခွေးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အဓိကအရင်းအမြစ်မှာသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်. ရှင်းပါတယ်.
ပြီးတော့အပြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ တာဝန်နဲ့ဖြေရှင်းမှုအကြောင်းပါ။ အပြစ်ရှိတယ်၊ နောင်တရမယ်၊ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမယ်၊ နုတ်ထွက်မယ်၊ ငါတို့ရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုခြယ်လှယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအစေခံမှာမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့အရည်အသွေးတွေမဟုတ်ဘူး။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာမင်းရဲ့ခွေးနဲ့ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီဖို့အတွက်သင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်၊ ကြိမ်, ၎င်းသည်သူနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤစိတ်ခံစားမှုစွမ်းအင်အမျိုးအစားနှင့်အမျှများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုလိုကျေနပ်မှုကင်းမဲ့သောကိုယ်ဟန်အနေအထား၌ကျောက်ချရပ်နားမည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးတွင်အမှားပြင်ဆင်ရန်သဘောထားကိုအောက်ပါကဲ့သို့သောစကားစုများဖြင့်အတည်ပြုပါလိမ့်မည်။ သူနဲ့တူတယ်၊ သူဟာခွေးတစ်ကောင်ကိုက်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်အဖြစ်၊ ဒီခွေးကသူဟာမိုက်မဲတဲ့သူပါ၊ သူပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရန်သူကငါ့ဥစ္စာပဲ၊ ငါ့ခွေးဟာရူးနေတယ်၊ ။။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ခွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မနှစ်သက်သည့်အပြုအမူများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးရန်သာမကအခြားအရာများ၌လည်းထိုအပြုအမူနှင့်အာဏာအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားပြင်ပသို့ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအထောက်အကူပြုသည်။ သူသည်ထိုကဲ့သို့သောပင်ကိုစရိုက်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရှားရန်မည်သည့်အရာမျှမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွေးကိုဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်အောင်ပြု ပြင်၍ မည်သည့်ပြင်ဆင်မှုမျိုးကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။ ဤသည်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေထဲကထွက်ခွာမည်နှင့် အလှည့်အတွက်လက်ခံမှုကိုရှာတစ်မျှတမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်နှင့်၎င်း၏ချို့ယွင်းချက်များ, များသောအားဖြင့်ဖြစ်သောခွေးနှင့်ကျန်းမာဆက်ဆံရေး၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ အော်ဟစ်ခြင်း၊ နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခြင်း၊က, မဟုတ်ရင်မဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့သူတို့အတူတကွငါတို့ရှိသမျှသည်အတူတကွငါတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနှင့်အလှည့်အတွက်ကျနော်တို့ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးသောခံစားချက်တိုးမြှင့်စေမည်ဖြစ်သောနောင်တ, နောင်တ, ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်နှုတ်ထွက်စာ၏ဖြစ်စဉ်များအဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုတစ် များသောအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်၏သက်တမ်းကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်အဆုံးစွန်သောနည်းသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။။ ကျွန်ုပ်သည် Sevillian ဖြစ်ပြီး၊ ဥရောပရှိ Seville တွင်နေထိုင်ပြီးခွေးအများစုကိုစွန့်ပစ်ပြီးအရှိဆုံးခွေးများကိုသတ်ဖြတ်သည်။ ဒါဟာအစုလိုက်ပါပဲ။ ၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်၍ နာကျင်မှုရှိသောလူကြိုက်များသည့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာပေါ်တွင်အခွင့်အလမ်းများဆုံးအဖြစ်ကိုထိခိုက်စေသည်။တိရိစ္ဆာန်များ.
ဒီ post ကိုအနည်းငယ်အကျဉ်းချုပ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်တစ် ဦး အလွန်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုခွေးနှင့်ပိုင်ရှင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ပညာရေးနှင့်အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်သည့်အခြေအနေများမှအလွန်ကြီးမားသောပြဇာတ်များနှင့်မသက်မသာအခြေအနေများသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ အဲဒါကိုပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါ.
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းပြောခဲ့သလို ဒွန် Miguel Niebla Calderón: ဒါဟာလူသားတွေဟာမြောင်းတွေဖြစ်တယ်.
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်နောက်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ထပ်မံ၍ ပြောမည်။ ငါသည်သင်တို့၏ခွေးကောင်းသောစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ယူပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွင်ပညာပေးခြင်း - လူသားများဖြစ်ပေါ်စေသောစိတ်ဖိစီးမှု
စိတ်မကောင်းစရာကလူအနည်းငယ်ကသာဒီအကြောင်းကိုသိကြသည်၊ သင်ရှင်းပြတဲ့အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ သင်လုံးဝမှန်ပါတယ်။
Iris ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်သိလိုသည့်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်သိလိုစိတ်များရှိပါကကျွန်ုပ်အားဖြေကြားရန်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းမြောက်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွင်ပညာပေးခြင်း - လူသားများဖြစ်ပေါ်စေသော II စိတ်ဖိစီးမှု
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ပညာပေးခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးခွေးကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း